Progressive Voice » Violence against Civilians
Posts Tagged ‘Violence against Civilians’
ကနီမြို့၊ ကင်းရွာဒေသခံတို့ကို စစ်တပ်က ဓားဖြင့်မွှန်း၍ နှိပ်စက်
June 20, 2021 • Author: Evil Coup (Myanmar)
စစ်တပ်၏ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် မှော်ဘီဒေသခံ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ
ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့တွင် KHRG ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ညမှာ ဒရွတ်တိုက်ဆွဲသွားတာသာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး မနက်အလောင်းလာယူခိုင်းတာကြုံရ
June 19, 2021 • Author: Ma Marlar Win (Pakokku City)
Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations after adoption of the draft resolution (A/75/L.85/Rev.1) at the 83rd Plenary Meeting of the United Nations General Assembly
June 18, 2021 • Author: Permanent Mission of Myanmar to the United Nations
(၇၅)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ (၈၃)ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အဆို (A/75/L.85/Rev.1) အားအတည်ပြုပြီးနောက် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဉီးကျော်မိုးထွန်း က ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၁)
June 18, 2021 • Author: National Unity Government (Ministry of Health)
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၂၁)
June 17, 2021 • Author: National Unity Government
National Unity Government Announcement No.7/2021
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကြေညာချက်အမှတ် (၇/၂၀၂၁)
Letter dated 17 June 2021 from the Permanent Representative of Myanmar to the United Nations, H.E. U Kyaw Moe Tun, addressed to the Secretary-General H.E. Mr. Antonio Guterres
June 17, 2021 • Author: Permanent Mission of Myanmar to the United Nations
Letter dated 17 June 2021 from the Permanent Representative of Myanmar to the United Nations, H.E. U Kyaw Moe Tun, addressed to the Secretary-General H.E. Mr. Antonio Guterres, on the recent serious situation in Kinma Village, Myanmar, and the announcement (7/2021) from the National Unity Government of Myanmar.
UN in Myanmar Alarmed at Sharp Deterioration of Human Rights Environment
June 17, 2021 • Author: United Nations Myanmar